2077 माघ 14, बुधबार
मनिषाको समर्थनमा कलाकार भन्छन् भारतीय मिडियाले हेपाहा प्रवृत्ति देखायो
सिनेपाटी | प्रकाशित: २०७७, जेष्ठ ८, विहिबार
आफ्नो जन्मभूमि दुख्दा आफ्नो पुर्खाले जोगाएर राखेको मुलुकमा समस्या आउँदा कसलाई दुख्दैन र ? पराइ देशमा गएर कर्म गर्दैमा केही सफलता पाउँदैमा आफ्नो मातृभूमिलाई लत्त्याउन कसैले सक्दैन, कसैले औँला उठाउँदा चुप बस्न सक्दैन । नेपाल पछिल्ला केही दिन यता निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर कोरोना सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दै जानु अर्को तिर छिमेकी मुलुक भारतले सिमाना अतिक्रमण गर्दै सडक पुर्‍याउनु । यसरी नेपाललाई कुनै आधिकारिक सूचना नगराई नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा भारतले आफ्नो अधीन जमाउनुलाई नेपालीले सामान्य लिने कुरै भएन । यसैको विरुद्ध आवाज उठिरहेको छ । सरकारले पनि लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहित नेपालका स्थानलाई समेटेर नेपाली नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसलाई सारा नेपालीले सफलताको एउटा कदमको रूपमा लिएका छन् । यस खुसीयालीमा नेपालमा रहेका नेपालीले मात्र खुसी साटेका छैनन् प्रवासमा बस्ने नेपालीले पनि निकै हर्ष मानेका छन् । आखिर आफ्नो देशको स्वधिनताको कुरा हो । यसै बिच विगत लामो समय अर्थात् भनूँ आफ्नो करियर भारतमा बनाएर सफलता पाएकी नेपाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले पनि देशको खुसीयालीमा आफ्नो पनि खुसी बाँडेकी थिइन् । मनिषाले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको नयाँ नक्सा पारित भएको विषयमा गरेको ट्विटलाई मनिषाले रि-ट्विट गरेकी थिइन् । 'हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद । अब हामी तीन महान् देशहरूबिच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौँ' लेखेकी थिइन् । यही ट्विटलाई लिएर भारतीय मिडिया मात्र होइन भारतीय जनता समेत उनीमाथि खनिएका छन् ।
उनलाई भारतको खाएर चीनको इसारामा चल्ने भन्दै उनको खण्डन गरिएको छ । यसरी उनीमाथि भारतीय मिडिया खनिनु अनि एक नागरिकले आफ्नो देशको लागी देखाएको प्रेमलाई लिएर प्रोपोगाण्डा निर्माण गर्नु निकै अपरिपक्वताको उदाहरण हो । मनिषाको विरोध भएसँगै नेपाली जनता एवम् सेलिब्रेटी कलाकारहरू एकजुट भएका छन् । उनीहरूले एक सचेत नागरिकले आफ्नो देशको खुसी र दुखमा साथ दिनु त्यो पनि आवश्यक परेको बेला निकै सरहानिय रहेको विचार राखिरहेका छन् । कलाकार निर्माता दीपकराज गिरीले नेपाली छोरी भएकाले नेपालको पक्षमा बोल्नु कुनै अनौठो कुरा होइन र भारतीय मिडियाले यस कुरालाई बङ्गाएर प्रस्तुत गर्नु नै उनीहरूको समस्या रहेको ब ताएका छन् । उनले मनिषाले कतै पनि भारतको विरोध गरेर चीनको समर्थन नगरेको पनि खुलाए । यसै गरी कलाकार विल्सन विक्रम राईले पनि आफू मनिषाको साथ रहेको ब ताएका छन् । यसै विषयमा गायिका इन्दिरा जोशीले पनि मनिषाको समर्थन गर्दै आफ्नो विचार राखेकी छिन् । उनले अभिनय क्षमताका कारण मनिषाले बलिउडमा थुप्रै योगदान दिएको, उनले बलिउडलाई थुप्रै उत्कृष्ट चलचित्र दिएको, त्यहाँ उनले कर तिरेकी छिन । यो कुनै व्यक्तिगत कुरा नभएर सेवाको आदान–प्रदानको कुरा हो लेखेकी छिन् । यसै गरी महानायक राजेश हमाल ले पनि भारतको पछिल्लो गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्दै आफ्नो विचार राखेका छन् । हमालले फेसबुकमा भिडियो नै सार्वजनिक गरेर आफ्नो धारणा राखेका हुन् । उनले भारतको पछिल्लो समयको गतिविधि स्वीकार्य नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनी भन्छ, 'सम्पूर्ण नेपाली जनताले आफ्नो सीमाको विषयमा कुनै पनि खालको सम्झौता गर्दैनन् इतिहास नै साक्षी छ कि, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भू-भाग हो' । साथै नेपाल र भारतबिच उठेको सिमानाको समस्याले सिङ्गो देशका नागरिकलाई जस्तै आफूलाई पनि मर्माहत बनाएको बताएका छन् । उनले भारतले सिमानाको समस्यालाई इतिहास, तथ्याङ्क र प्रमाणको आधार हेरेर कूटनीतिक तवरमा समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् ।
अर्की अभिनेत्री पूजा शर्माले पनि भारतले मनिषा कोइरालाप्रति गरेको रूखो व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मा लेखेकी छिन्, ' मनीषा दिदीले भारतको नुन भिख मागेर खानुभएको हैन आफ्नो कलाकारितामा उभिएर खानुभएको हो मनीषा दिदीको योगदानलाई लत्त्याउँदै उल्टै अपशब्द बोल्ने मिडिया प्रति टीठ लागेर आयो | नेपालीहरू काम र कर्मको सिलसिलामा सन्सारभर होलान् तर जब देश र आफ्नो जमिनको कुरा हुन्छ त्यसबेला देशकै पक्षमा बोलिन्छ जन्मदिने आमालाई पराई ठानेर मेरै आमाको अङ्ग लुछने पराईलाई आमा भन्न सकिँदैन चेतना भया ।' आफ्नो अभिव्यक्ति निकै खुलेर राख्ने अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले पनि यस विषयमा बोलेकी छिन् । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै करिश्माले भारतीय मिडियाले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनी लेख्छिन्, 'मनिषा जीको भनाइलाई छिमेकी मिडियाले अतिरञ्जित गरेर प्रचार गरिरहेको छ , वहाँले लेखेको आधा लाइनलाई मात्रै फोकस गरेर प्रचार गरिरहेको छ ।' हास्य कलाकार कुमार कट्टेल जिग्रीले अब क्लिन फिड लागु गरेर भारतीय मिडिया तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन्। उनी लेख्छन्,' हाम्रो स्वाभिमान र राष्ट्रियतामाथि जथाभाबी गाली गलौच गर्ने भारतीय च्यानलहरूलाई तत्काल क्लिन फिड लागू गरी बन्द गरियोस् सरकार ।'
यसरी देशको मुद्दामा कलाकार लगायत सारा नेपाली एक जुट भएर लागिपर्नु निकै सकारात्मक हो । हामीले देश प्रतिको माया देखाउने र लागिपर्ने बेला यही हो । अझ कलाकार देशका गहना हुन् त्यसैले उनीहरूले सम्पूर्ण नेपालीको आवाज बनेर उठ्नु निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । ​
कति कमाउँछिन् प्रियंका कार्की ? भन्छिन् 'चलचित्रबाटै सन्तुष्ट छु'
नामको कारण फेरि दिएन साम्राज्ञीलाई बेलायतले भिसा
सलमान खानलाई ज्यान मार्ने धम्की !
२०१७ मा सुपरहिट बनेका ८ बलिउड चलचित्र
दिपिका बनिन् बलिउडकी मंहगी अभिनेत्री !
युट्युवमा पनि हिट 'प्रेमगीत', के फेरि देखिएला पूजा र प्रदीपको जोडी ?
‘क्रिष्टल क्लाउज क्रु’ बन्यो ‘मिस्टर झोल’ कभर भिडियोको विजेता
‘आरआरआर’ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
अमर -अमृत सँग मक्ख प्रिज्मा- प्रिन्सी (फोटो फिचर)
‘आरआरआर’को रिलिज मिति घोषणा
प्रमोद खरेलको "फुल सम्झेर रोए" सार्वजनिक (भिडियो)
प्रवीणको 'थोरै खुसी' मा कुलदिप र कविता ( भिडियो )